Canalys: Xiaomi ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ အိန္ဒိယ စမတ်ဖုန်း ဈေးကွက်မှာ နံပါတ် တစ် နေရာမှာ ရပ်တည် နေ - Pandaily
Jan 25, 2022, 20:16ညနေ 2022/01/25 23:10:53 Pandaily
သုတေသန ဌာန Canalys မှ ထုတ်ဝေ သည်၂၀၂၁ ခုနှစ် အိန္ဒိယ စမတ်ဖုန်း ရောင်းချ မှု စာရင်းအဂၤါေန႔ ။ Xiaomi က နံပါတ္ (၁) နဲ႔ Samsung က နံပါတ္ (၂) နဲ႔ Vivo, realme နဲ႔ OPPO တို႔က နံပါတ္ (၂) မွာ ရပ္တည္ ေနပါတယ္။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယ စမတ်ဖုန်း ဈေးကွက် သည် စံချိန်တင် ၁၆၂ သန်း တင်ပို့ ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ထက် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ Xiaomi က စမတ္ဖုန္း အလံုးေရ ၄၀. ၅ သန္း တင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္ ရဲ႕ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း နဲ႔ Samsung က ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္း တင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေရာင္း အား အေကာင္းဆံုး အမွတ္တံဆိပ္ ၅ ခု ထဲမွာ Vivo တခုတည္း သာ က်ဆင္း သြားၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကထက္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္း သြားခဲ့ပါတယ္။ အ လျင်မြန် ဆုံး တိုးတက် နေတဲ့ ဘရန်း ကတော့ realme ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက် လာပါတယ်။
Xiaomi ဟာ မႏွစ္က စတုတၳ ကြာတား မွာ အစီးေရ ၉ ဒသမ ၃ သန္း တင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္ ေဝ စု ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ Samsung သည် ရောင်းအား ၈. ၅ သန်း ဖြင့် ဒုတိယ နေရာတွင် ရှိပြီး ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ အိန္ဒိယ တွင် realme ၏ ရောင်းအား သည် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တတိယ နေရာသို့ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၇. ၆ သန်း တင်ပို့ ခဲ့သည်။ စတုတၳ နဲ႔ ပဥၥမ ေနရာကို Vivo နဲ႔ OPPO တို႔က ရယူ ထားၿပီး အလံုးေရ ၅ ဒသမ ၆ သန္းနဲ႔ ၄ ဒသမ ၉ သန္း အသီးသီး ရရွိ ထားပါတယ္။
“၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ အိန္ဒိယ စမတ်ဖုန်း ဈေးကွက် ရဲ့ ဒိုင်းနမစ် ဟာ သုံးလ တစ်ကြိမ် ပြောင်းလဲ နေတယ်” လို့ Canalys ရဲ့ လေ့လာဆန်းစစ် သူ Sanyam Chaurasia က ပြောပါတယ်။ “ယခုနှစ်တွင် COVID-19 အကျပ်အတည်း ၊ စားသုံးသူ ဝယ်လိုအား အတက်အကျ နှင့် ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် ပြတ်တောက် မှု တို့သည် စျေးကွက် ကို အနှောက်အ ယှက် ဖြစ်စေသည်။ ကုန်ပစ္စည်း ပေးသွင်း သူများသည် လမ်းကြောင်း များစွာကို အာရုံစိုက် ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် အမျိုးမျိုးကို တိုးချဲ့ ခြင်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်း ထောက်ပံ့မှု တိုးချဲ့ ခြင်းအားဖြင့် ပြောင်းလဲနေသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်သည်။”
Chaurasia က ဆက် ပြောသည်-“ဥပမာ-realme နဲ့ Samsung တို့လို ရောင်းချ သူတွေဟာ supply တွေကို ထိထိရောက်ရောက် စီမံခန့်ခွဲ ဖို့ chipset configurations တွေကို အမျိုးမျိုး ကွဲပြား စေတယ်။ Realme ၏ စံချိန်တင် စုစုပေါင်း တင်ပို့ မှုသည် စီမံကိန်းနှင့် စာရင်း စီမံခန့်ခွဲမှု တို့တွင် တီထွင် မှုများကြောင့် ဖြစ်ပြီး Narzo 50a နှင့် C11 ကဲ့သို့သော အစုလိုက်အပြုံလိုက် စျေးကွက် စမတ်ဖုန်း များ ကိုကောင်းစွာ ထောက်ပံ့ နိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကာကွယ်ဆေးထိုး ခြင်း၊ စျေးကွက် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ် ခြင်းနှင့် ၀ ယ်လိုအား ကျဆင်း ခြင်းတို့ကြောင့် စမတ်ဖုန်း တင်ပို့ မှုသည် တစ်နှစ် ပတ်လုံး စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့သည်။ အစားထိုး ဝယ်လိုအား နှင့် စမတ်ဖုန်း များသို့ ဖောက်သည် အသစ်များ ပြောင်းလဲ ခြင်းတို့ကြောင့် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် ဆက်လက် တိုးတက် မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ “
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:သုံးသပ် ချက်-Apple က ကမ္ဘာ့ စမတ်ဖုန်း ဈေးကွက်မှာ နံပါတ် (၁) ကို ပြန်လည် ရယူ နိုင်ခဲ့ပြီး Xiaomi ကတော့ နံပါတ် (၃) နေရာမှာ ရပ်တည်
CAICT မှ ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်း စမတ်ဖုန်း အမှတ်တံဆိပ် များ၏ ရောင်းအား အဆင့်သတ်မှတ် ချက်မှာ OPPO, Vivo, Apple, Xiaomi နှင့် Honor တို့ဖြစ်သည်။ စတုတ္ထ သုံးလပတ် မှာ iPhone 13 Series တွေ ခေတ်စား လာ တာနဲ့ အမျှ Apple ဟာ တစ်နှစ် ပတ်လုံး Xiaomi ထက် ရောင်းအား ပိုများ လာပါတယ်။
Mobile World Congress 2022 တွင်ပါ ၀ င် ခွင့်ရ ခဲ့သည်
တရုတ် စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူ Honor က ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်တွင် ကျင်းပမည့် Mobile World Congress သို့ ထပ်မံ တက်ရောက် မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြာသပတေး နေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
Gadgets Jan 28 ဇန်နဝါရီ 28, 2022